» Dagaalyahano Hubeeysan oo weerar culus ku qaaday Xadka Dowladaha Somalia iyo Kenya oo ciidamada labada dalka ka wada howlgalayeen.
Dagaalyahanada Al-shabaab oo lagala Wareegay Deegaano ka tirsan Galgaduud Ee Bartamaha Soomaaliya
Madaxweyne Uhuru Kenyatta:’’ Waan sii wadayna dagaalka aan kula jirno kooxda al-Shabaab “
Arimaha Lamaanaha ee maanta waa sidee Tolow Qeeylo baa badatay Furiine waaba ka Daran yahaye(Garoob lee Batay yaab)….
Daawo Sawirada: Gabar 14 sano jir ah oo Bukaan socod ah Daryeel u baahan ay celinayaan wadanka Swedan….
Daawo Muqaalka:Subxanalaah Buug Cusub oo soo baxay &Shiiq mohamed Cabdi umul oo uga digay bulshada oo dhan(Bugan oo Gaalnimo cad xambarsan)….
Dagaalyahano Hubeeysan oo weerar culus ku qaaday Xadka Dowladaha Somalia iyo Kenya oo ciidamada labada dalka ka wada howlgalayeen.
Jul 22, 2014 - jawaab	Dagaalyahanada aad u hubeeysay ayaa lagu soo waramayaa in Xalay ay Weerar Xoogan ku qaadeen Bar-Koontarool Ciidamada Dowladda Kenya ay ku leeyihiin Xadka kala qeybiya Soomaaliya iyo Kenya.
Sida ay wararka sheegayaan weerarkan Kooxaha hubeysan ay ku qaadeen Saldhig Ciidamada Dowladda Kenya ay ku leeyihiin Xuduudka Soomaaliya iyo Kenya ayaa la sheegayaa in uu ka dhashay Qasaaro kala duwan.
Sido kale Inkastoo aan la ogeyn Qasaaraha dhabta ee ka dhashay Weerarkan hadan waxaa sidoo kale aan la shaacin Cidda ay ka tirsan yihiin Kooxaha Weeraray Bartaasi Koontarool.
Si kastaba ha ahaatee muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa Dagaal yahano ka tirsan Ururka Al Shabaab waxaa ay siyaabo kala duwan u weerareen Degaano dhaca Dalka Kenya.
« Warbixinta Ka HoreysayDagaal la isku mirtay oo xalay ka dhacay Magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay	Warbixinta Xigto »Ugu yaraan 8 qof oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay Nugaal	Leave a Reply Cancel reply